China graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist Manufacturer uye nokutengesa | Yidong
Graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist, Kukuru Mukutonga kwechiFascist chakagadzirwa graphite zvinhu. Rudzi rwevanhu rwune nhoroondo refu yekushandisa graphite crucibles. Vanhu vekutanga vaishandisa natural graphite (flaky graphite uye earthy graphite) nevhu, slag kana jecha kusanganisa zvidimbu, uye nzira dzekugadzira ivhu dzakashandiswa kugadzira graphite crucibles yekuyenga simbi (mhangura, Iron, simbi, nezvimwewo). Graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist ane yakakwirira zvemaziso simba, refractoriness, chafariz conductivity, inogona kumira yakawanda yekunyungudika uye inogona kudzivisa kukanganiswa kweiyo yepamusoro tembiricha mhinduro. Graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist anogona kusungunuka nyore kufurirwa kukandira simbi, kukanda simbi, mhangura chiwanikwa, zingi chiwanikwa, mhangura solder, nezvimwewo Nekuvandudzika kwemaindasitiri emazuva ano, akasiyana simbi maindasitiri anoshandisa magetsi mavira kuti anyemhe simbi dzakasiyana, saka kushandiswa kwe graphite crucibles vachishandisa zvakasikwa graphite se chinhu chakarambidzwa. Nekudaro, akawanda madiki madiki maindasitiri anonyudza anoramba achishandisa iyi mhando ye graphite crucible.
Kubva pakauya graphite yekugadzira pakupera kwezana ramakore rechi19, vanhu vakagadzira graphite yekugadzira kuita graphite crucibles. Iko kuvandudza uye kugadzirwa kweiyo yakachena-yakachena yakanaka-chimiro graphite, yakakwira-simba graphite, girazi kabhoni, nezvimwewo, graphite crucibles dzakagadzirwa nezvinhu izvi zvinowanza mashandisirwo emhando ye graphite crucibles.Kuwedzera kune kunyorera simbi, graphite crucibles anoshandiswa zvakare mu kunatswa kwesimbi dzinokosha dzakadai segoridhe nesirivha. , Atomic simba uranium inonyungudika, semiconductor zvinhu silicon imwe kristaro, germanium imwechete kristaro kugadzira, uye kunoiswa kune akasiyana makemikari ongororo.
Graphite crucibles vanoiswa muzvinhu zvakasikwa graphite crucibles, munhu-made graphite crucibles, mukuru-kuchena graphite crucibles, vitreous kabhoni crucibles, etc. maererano yavo zvinhu ehupfumi. Zvinoenderana nechinangwa ichi, kune zviputi zvesimbi, zviputi zvemhangura, zviputi zvegoridhe, uye zvipenga zvekuongorora.
Iyo yekugadzira tekinoroji chikamu chemombe graphite crucibles chasvika kana kutodarika zvakaunzwa kunze kwenyika. Yakakwirira-yepamusoro epamba graphite crucibles ane anotevera maitiro:
1. Iyo yakakwira density ye graphite crucibles inoita kuti crucibles ive neakanakisa ekushisa conductivity, uye ayo ekupisa conductivity ari akanyanya nani pane mamwe akaunzwa kunze crucibles. ; Graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist.
2. graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist ane rinokosha glaze rukoko uye gobvu Kuumbwa zvinhu, izvo kunonatsiridza zvikuru ngura nemishonga chigadzirwa uye anowedzera ayo basa upenyu.
3. Izvo zvikamu zve graphite zviri mu graphite crucible zvese zvakasikwa graphite ine thermal conductivity yakanaka kwazvo. Mushure mokunge graphite crucible yatsva, haifaniri kuiswa patafura inotonhorera yesimbi ipapo kuti isatsemuka nekuda kwekukurumidza kutonhora.
1. Iyo yakatarwa nhamba yeiyo Kukuru Mukutonga kwechiFascist ndiko kugona kwemhangura (kg)
2. graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist inofanirwa kuchengetwa pakaoma kana padanda padanda painochengetwa.
3. Bata zvine hungwaru pakutakura, uye zvinorambidzwa zvachose kudonha nokuzunza.
4. Usati washandisa, inoda kubikwa nemidziyo yekuomesa kana choto, uye tembiricha inowedzerwa zvishoma nezvishoma kusvika ku500 ° C.
5. Iyo inotakurika inofanira kuiswa pazasi pechiso chemuromo wevira kuti tidzivirire chifukidzo chevira kubva pakupfeka muromo wepamusoro weiyo yekurovererwa.
6. Kuwedzera zvishandiso kunofanirwa kuve pamusoro peyekunyungudika kweiyo crucible. Usawedzere zvinhu zvakawandisa uye kudzivirira iyo inotonhorera kuti isamanikidzwe.
7. Kunze kwechoto uye chinosunga chinosungirwa chinofanira kuenderana nechimiro cheicho chinokunda. Chikamu chepakati checampu chinofanira kudzivirira kuti chiya chisanyanye kukuvadzwa nechisimba.
8. Paunenge uchidhonza iyo yakanyungudutswa slag uye coke pamukati nekunze masvingo eiyo Kukuru Mukutonga kwechiFascist, rova ​​kuti kudzivirira kukuvara kune Kukuru Mukutonga kwechiFascist.
9. Daro rakakodzera rinofanira kuchengetwa pakati peiyo inovhuvhuta uye madziro evira, uye iyo inokwenenzverwa inofanira kuiswa pakati pevira.
10.Kushandiswa kwakaringana kwemoto kuyamura uye zvinowedzera zvinodzora hupenyu hwebasa hweiyo yekurovererwa.
11. Panguva yekushandisa, kushandura chinozunguzika kamwe chete pasvondo kunogona kurebesa hupenyu hwebasa hweiyo yekurovera.
12. Dzivirira yakasimba inoparadza murazvo kubva wakananga kumwaya padivi nepasi murwi weiyo Kukuru Mukutonga kwechiFascist.
Pashure: Graphite yakaumbwa zvikamu
Zvadaro: UHP Graphite electrode
Graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist Price
Graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist Sizes
Graphite Crucibles Vatengesi
Graphite Yakawanikwa Crucibles
Graphite Yanyunguduka Kukuru Mukutonga kwechiFascist
Huru Graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist
Small Graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist